रिपोर्टर: हेमन्त विवश बाट सम्पूर्ण खबर
बेसर्मी गोसाई लज्जित जनता
‘बनियाँले कात्रो बेच्दा नाफा खाँदैन! तर यी हिजडाहरूले त चीतासम्म पनि नाफा खान छोड्ने रहेनछन्! धन्य ईश्वर नीचताको पराकाष्टताको पनि नमूना हेर्ने अवसर प्राप्त भयो।’
गोसाईका भाषणमै झुण्डिएको आयोजना
जेठको पहिलो साता डोटी गोपघाटस्थित सेतीमा पानीको बहाव मापन गरिरहेको देखिन्थ्यो तीन चार जनाको एउटा समूह। ‘त्यहाँ के भैरहेको छ?’, त्यो दृश्य देखेपछि सोधेको थिएँ, त्यहाँका केही स्थानीयलाई। सबैले मुख बाङ्गो बनाउँदै उतापट्टी हेर्दै नहेरी भनेका थिए, ‘के हुनु पानी नाप्दै भत्ता पच
लकडाउनका कारण पहाडमै थुनिएका मेरा पाइला गाउँघर डुल्न व्यस्त भए यसपल्ट। लड्न, भिड्न तथा संघर्षका तानाबुना बुन्न सिकाउने जिन्दगीले समयमै सिकाइसक्छ विगतका दिनहरुको सम्झनामा डुब्न र यादको तकिया भिजाउन। विगतमाझैं काफल, ऐसेलु, किम्बु, आलबोखडा जस्ता कतिपय फलहरु हतारिदै पाकिरहेका थिए। बादरले
स्थानीयका खल्ती छनाइ पर्देशका मुख छनाइ गुना (लङ्गुर) बानर रुख गए चढ्नाखि रुख छनाई बिहानको घामका पाइलाले डाँडाकाँडा छाइसकेको थियो। सेती किनारको गर्मी। डोटी गोपघाटस्थित झोलुङ्गे पुल मुनि ७ जना लाहुरे पसिना पुछ्दै काक्रा खाइरहेका थिए। स्थानीय
लकडाउन, सेतीका छाल र फैलिँदै गरेको जाल
उहिले उहिले जेठाजु देख्दा टाउको छोपेर हिँड्ने बुहारीझैं छोपिएको थियो मखलरले मुख र टाउको। एकजोर आँखा छाइरहेका थिए बाटोमा। त्यो दिन उनी अलि खिन्न मुद्रामा देखिन्थे। यसरी खिन्न मुद्रामा देखिनुको कारण रहेछ खासै माछा नपाउनु। सर्लाहीका पुनित सहनीलाई सैपालको आँग
चैत मात्तर गयो गोसाई बिसुँ आएइन
वैशाख लागनु अघि चैत सकिन्या हो कलीका कुकर्मी चाला के के देखिन्या हो यतिखेर आँखा नजिकै छ गाउँ। गाउँमै छु म। बोटवृक्ष सबैमा नयाँ पलुवा पलाएका छन् मानौ तिनले पनि नयाँ लुगा लगाए। हरियाली धर्ती,वनजंगलतिर फूल
चैत, क्वारेन्टाइन र कोरोना पूजा
दुई बाला बयली खेल्दा ड्याली काकुनका दुई मैना कसरी काटूँ चैत फागुनका गाउँले परिवेश बिहानै सुनिन्छ कोयलीको कुहू कुहू। वारिपारि डाँडामा नयाँ पालुवा पलाइरहेका रुखहरू देख्दा लाग्छ भरखर बिमार ठिक भएर तग्रिदै गरेका जीवन जस्ता। कनिकुथि
समय दौडिरह्यो । अनुहार बिस्तारै खिइँदै गयो । चेहरा मलिन हुँदै गयो । बिस्तारबिस्तारै स्मृतिले काम गर्न छोड्यो । मान्छेलाई चिन्न छोडिदिनुभयो भण्डारी सर (डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारी) ले । केही समय यता मैले भेट्न पाएको थिइनँ । भेट्न मन लाग्थ्यो । भेट्न जादा धेरै बेर उहाँको छेउमा बस्न सक
काट्न खोजेँ आफ्नै घाँटी
केही शोभा हरिण शिशुका नृत्य सञ्चारमा छ केही शोभा वन कुसुमका स्वच्छ संसारमा छ केही शोभा शरद ऋतुका चन्द्र उद्यानमा छ सब्बै शोभा नव युवतीका मन्द मुस्कानमा छ –
चिनिया राष्ट्रपति सी । स्केच साभार : South china morning post